Trano hazo, fomba fisafidianana azy ireo, tombony sy fatiantoka | Fanavaozana maintso
Daniel Palomino | | Trano maintso
Ny sehatry ny trano hazo dia nitombo be tao anatin'ny folo taona lasa ary ny vidin'ny fifaninanana sy ny vanim-potoana fohy kokoa amin'ny fananganana no mahatonga ny maro amintsika liana amin'ity karazana trano ity.
Ho marimarina kokoa ny trano hazo dia manodidina ny 25-30% mora kokoa ny trano vita amin'ny beton ary amin'ny lafiny fananganana dia tsy tokony hatao mihoatra ny 5 na 6 volana.
Izany no mahatonga ny olona maro manomboka mifidy azy ireo amin'ny trano faharoa ary taty aoriana ho trano mandritra ny taona iray manontolo.
Raha trano hazo no tadiavinao tsy vitan'ny hoe mila mijery ny vidiny ianao ary ataovy tsara tarehy araka izay azo atao, mandraka androany misy karazany sy lafin-javatra maro tokony hodinihina hanana ny trano "saika tonga lafatra" ary lazaiko fa saika tonga lafatra satria tsy misy lafatra eto amin'ity fiainana ity.
Toy izany koa, Azonao atao ny mividy ny fividianana amin'ny alàlan'ny fomba maodely 3:
Ny Kit (fitaovana) ihany no ividiananao ary manangona azy manokana.
Mividy ny kitapo tafangona
Mividy ny turnkey ao an-trano, vita tanteraka.
Etsy ankilany, ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia farafaharatsiny ao España manangana trano hazo Ianao dia mila ny fahazoan-dàlana hanorina avy amin'ny Filan-kevitry ny Tanàna sy tetikasa mpanao maritrano.
Hamarino tsara fa namboarina ireo trano mifanaraka amin'ny CTE, fantatra amin'ny anarana hoe Code of Building Teknika.
1 Karazan-trano hazo.
1.1 Ny hazo.
1.2 Tenona maivana.
1.3 Tenona mavesatra.
2 Avy aiza ny hazo?
3 Ahoana ny fomba hisafidianana ny trano hazo "tonga lafatra"
3.1 Ireo singa fototra.
3.1.1 Inona no atao hoe rindrina OSB na vita?
3.1.2 Ny mety ho famaranana azontsika ampidirina.
4 Lafiny ara-dalàna amin'ny trano hazo any Espana.
4.1 Singa na fitsipika hikajiana.
4.1.1 Fitsipika fototra momba ny fananganana trano (NBE).
4.1.2 Ny lalàna momba ny fananganana trano (LOE).
4.1.3 Kaodim-pananganana teknika (CTE).
5 Tombony sy fatiantoka amin'ny trano hazo
5.1 Tombony na teboka tsara.
5.2 Tombony na teboka ratsy.
Misy izany karazana fananganana trano hazo telo, samy manana ny tombony sy ny fatiantoka entiny.
Voalohany indrindra dia hazo.
Ity karazana trano ity naorina na nitaingina mivantana teo amin'ilay tetika izy io mampiasa hazo mba hanomezana azy io toetra mampiavaka azy io.
Tombony io karazana trano io hatevin'ny hazo, miaraka amin'ity no tiako holazaina fa noho ny refin'ny hazo ananantsika a mpanara-maso ny mari-pana sy ny hamandoana ao anaty trano misy kalitao amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra, izay no mahaliana farany.
Ny olana na fatiantoka an'ity karazana ity dia ny tsy fahatanterahana ny firaisana eo amin'ny vatan-kazo iray sy ny iray hafa, na dia azo alamina amin'ny alàlan'ny zana-kazo toradroa izay mifanaraka tsara kokoa noho ireo boribory aza.
No ampiasaina takelaka sy ampahany voamarina izay manatsotra be ny fivoriana, miampy singa kely marobe manampy ny fanovana, prefabrication ary fifanakalozana.
Raha vao jerena, ny fahasamihafana misy eo amin'ny hazavana sy ny mavesatra mavesatra dia ny haben'ny vatan-kazo na ny tapa-kazo ampiasaina, fa tsy izany no izy.
Ao amin'ny webbing mavesatra dia misoroka ny fampiasana tonon-taolana mifangaro vy sy fantsika ary ireo fivondronana na sendika manararaotra ny fihenjanan'ny rafitra dia ampiasaina bebe kokoa.
Ankoatra izany, mamela ny fananganana tranobe misy rihana, zavatra izay miaraka amin'ny rafitra maivana dia mety hahafoana ny fitoniana avy amin'ny 3 haavo.
Izy ireo dia afaka ny ho roa hazo toy ny amin'ny karazana coatings hafa.
Trano izy ireo efa nivory tao amin'ny ozinina ary notaterina amina singa maromaro na iray aza, arakaraka ny haben'ny trano, hatramin'ny toerana farany.
Ity karazan-trano hazo ity matetika no be mpampiasa indrindra any Eropa afovoany sy avaratra.
Any Espana, satria mbola tsy safidy mahazatra dia vonona hampiroborobo azy ireo ny mpanao trano mandra-pahazoany izany.
Raha ny marina dia misy ny Fikambanan'ny mpanamboatra sy mpanorina trano hazo miaraka amin'ny tanjona lehibe, amin'ny lafiny iray, ny an'ny mifampiraharaha amin'ireo mpiantoka mba hisorohana ny sazy ary etsy ankilany, manolotra fampahalalana momba ny tombony an'ity karazana trano ity amin'ny ankapobeny, na ny olom-pirenena, ny mpanao mari-trano na ny mpanao trano.
Avy aiza ny hazo?
Toy ny lojika ny mieritreritra, ny hazo dia vokatra izay amidy ary toy izany manana faritra na kalitao maromaro, mandeha amin'ny optimum indrindra ka hatramin'ny eken'ny rehetra.
Trano hazo daholo izy rehetra ny kitapo fotsiny
Kalitao avo- Namboarina tany Failandy, Etazonia, Kanada, Danemarka, Norvezy ary Suède.
Kalitao ambany: vita tany Letonia, Frantsa, Polonina ary Espana.
Ny kalitao: vita tany Silia, Brezila, Litoania, Estonia ary Romania.
To fanasokajiana ity amin'ireo toetra samihafa no raisina isao ny masontsivana sasany tahaka azy ireo:
Ny antoka fa efa maina ny hazo. Amin'izay dia hialana amin'ny fiovana, hiova ho olana hafa.
Kajy ny entana. Izy io dia manondro ny enta-mavesatra izay mahazaka ny rindrina sy ny valindrihana.
Technology. Ny tena sarobidy dia ny isa fanaraha-maso isaky ny sombin'ny Kit.
Fatra sy hatevin'ny ravina hazo. Ny hatevin'ny 90mm tsara indrindra ary ny efitrano fitokana-monina mifangaro farafahakeliny 50mm miampy ny lamba anatiny.
Fitsaboana fanoherana ny hamandoana sy fiarovana. Famonoana bibikely sy fungisida.
taratasy fanamarinana Mifandraika amin'ny fitantanana ny ala tompon'andraikitra (FSC sy PEFC) ary ny mari-pahaizana CE.
Kalitaon'ny fitaovana. Ny hazo sarobidy indrindra dia avy amin'ny tendrombohitra avo sy hazo maniry miadana.
Miala tsiny raha milaza an'izany ao España raha mila trano hazo ianao dia tsy maintsy kalitao / fari-pitsipika mahazatra hatramin'ny hazo dia avy amin'ny hazo kesika an'ny Romanian Carpathians na dia ny tsy fahombiazana amin'ny fandaminana, ny famatsiana ny Kit ary amin'ny ora fanaterana.
Raha afovoany ny hazo avy any Espana, maninona no manafatra hazo avy any Romania izay manana kalitao manara-penitra?
Azo antoka fa efa nanontany tena ianao fa izany dia mora ny mahita, na dia tsy tiako manokana aza izany.
Satria Ny ankamaroan'ny mpaninjara any Espana dia miara-miasa amin'ity hazo ity satria manana ny vidin'ny fifaninanana indrindra izy ireo.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny trano hazo "tonga lafatra"
Efa naneho hevitra aho fa tsy afaka misafidy na manana trano tonga lafatra isika fa afaka manakaiky kokoa an'io fanjakana io.
Ny tsara indrindra ary na ny efa be mpampiasa aza dia ireo an'ny lalitra maivana izay azo antsoina koa hoe trano amerikana, trano kanadiana na hazo fisaka (hazo fisaka).
Trano hazo karazana maivana maharitra 75 taona ny faharetanaRaha lazaina amin'ny teny hafa dia lehibe kokoa noho ny trano hazo mafy izy io ary mihoatra ny rafitra biriky na beton aza.
Ankoatr'izay, ireo trano ireo mahavita mandanjalanja be eo anelanelan'ny hafanana, etona ary insulation miaina amin'ny rindrina izy ireo.
Midika izany fa fanatsarana ny fari-piainana ao an-trano.
Ireo singa fototra.
Ny singa fototra mandrafitra trano maivana dia 4: tafo, sandoka (fisarahana eo amin'ny gorodona), rindrina anatiny sy rindrina ivelany.
Rindrina ivelany manana:
Casing beam 45x145mm
Fitaovana haingon-trano (sehatra hazo ohatra)
Membrane tsy misy rivotra
Solaitrabe na OSB
Fonon-tsoloky ny etona
Rindrina anatiny miaraka:
OSB na plasterboard 12,5mm
Ny fisarahana eo amin'ny gorodona na ny nataony tsy maintsy manana:
Ary farany ny tafo miaraka:
Tafo (tégola, tile)
Rafitra fananganana 50x20mm
Ny idealy tranon'ny hazavana dia ny fananana rafitra matanjaka sy mafy orina ao amin'ny habakabaka izay azonao ametrahana rindrina, izay misy firafitra koa hazo fisaka izay mamorona zana-kazo (izay no antony ahafantarana azy ireo ho toy ny hazo hazo) ary eo anelanelan'izy ireo dia raikitra ny famaranana anatiny sy ivelany, ary koa ireo singa hafa.
koa, Iray amin'ireo tombony amin'ity karazana trano hazo ity dia azo atao izany omeo anao ny farany izay tianay indrindra amin'ny endriny mitovy, na ao anatiny na any ivelany (facade), samy hafa na mitovy amin'ny andaniny roa.
Etsy ankilany, tombony iray hafa amin'ny lamba maivana ny hoe trano lafo no mora vidy kokoa, farafaharatsiny amin'ny teôria, noho ireo karazana trano hafa nanomboka vitsy kokoa ny hazo ananany hatramin'ny rindrina avy amin'ny OSB izy ireo na zavatra hafa.
Inona no atao hoe rindrina OSB na vita?
OSB dia ny fanafohezana ny Oriented Strand Board, nadika hoe tabilao miorina amin'ny chip ary io dia karazana tabilao mifangaro.
Ity solaitrabe ity dia mivoatra ny fivoaran'ny takelaka hazo fisaka, izay tsy tokony hiditra amin'ny takelaka maromaro na veneer hazo maromaro, fa ny sosona maromaro noforonina tamin'ny hazo fisaka na ny taolana dia natambatra, nifototra eny, nitodika tamin'io lafiny io ihany.
Ny mety ho famaranana azontsika ampidirina.
Efa nolazaiko teo ihany fa afaka misafidy ny farany na ny maromaro aza ho an'ny atin'ny trano na ho an'ny any ivelany fa fantatrao ve izay misy?
Eto dia hitanao Karazana famaranana 8 mifantina izay:
Takelaka OSB, nohazavaina teo aloha (fironana ankehitriny izy ireo)
Canaxel, Ity firakotra ity dia vita amin'ny poti-kazo avo lenta, izay manome ny hatsarana sy ny hamafin'ny hazo miloko tsy misy lesoka voajanahary.
Vato artifisialy, azo apetraka ho plinth ary izy no mora indrindra.
Vato voajanahary, mazàna dia napetraka ho antsipiriany manokana izy io satria nitombo ny vidiny.
Lela sy zoro hazo, manokana ho an'ny ety ivelany.
Monolayer, ity famaranana ity dia tsy inona fa ny rihitra manokana miaraka amin'ny fisehoana mitovy amin'ny simenitra. Tena lafo io ary efa misy kopia sasany toa ny fangaro simenitra sy lakaoly.
Rindran'ny tontolo iainanaVita amin'ny fitaovana voajanahary toy ny sokay, tanimanga ...
Lafiny ara-dalàna amin'ny trano hazo any Espana.
Misy ny olona mino fa ny trano hazo na trano efa vita dia tsy mila manaraka ny fahazoan-dàlana ary tsy izany no izy.
Tokony ho fantatrao izany ny trano hazo raha vantany vao eny an-tany izy ireo na raha ny marina dia "miorim-paka" amin'ny tany, amin'ny ampahany amin'ny tany vonona hampiasaina, heverina ho fananan-tany ary toy izany, iharan'ny lalàna an-tanàn-dehibe iraisana izy ireo.
Afaka misoratra anarana ao amin'ny Fanoratana trano vantany vao tafapetraka izy ireo.
Na izany aza, trano hazo efa vita na finday izay tsy "raikitra amin'ny vatofantsika" amin'ny alàlan'ny fananganana, izany hoe, afaka misaraka, mandrava na manova ny toerany izy ireo heverina ho fananana mihetsika izy ireo.
Noho io antony io indrindra, tsy maintsy mihaona amin'ny NBE, ny Fitsipika momba ny fanorenana ifotony ary manaja ny fitsipiky ny tany nametrahana azy ireo.
Dia toy izany hatrany tsy maintsy jerenao ny karazana tany izay ametrahanao ny tranonao, raha tany azo volena, tany tsy mandroso, tanàn-dehibe na ambanivohitra.
Singa na fitsipika hikajiana.
Ho an'ny trano hazo, heverina ho trano sy trano tsy maintsy jerena Fitsipika 3 fototra izay: Fitsipika fototra momba ny fananganana (toy ny trano finday), ny Lalàna momba ny fananganana trano (LOE) ary ny Kaodim-pananganana teknika (ECT),
Fitsipika fototra momba ny fananganana trano (NBE).
Manondro ny fiarovana sy fiarovana ny olona, fametrahana ny fepetra farafahakeliny hamaly ny fitakian'ny olombelona ary koa hiarovana ny toekarena eo amin'ny fiaraha-monina.
Ny lalàna momba ny fananganana trano (LOE).
Angamba ny lalàna mifehy ny fanorenana no manintona anao indrindra nanan-kery tany Espana hatramin'ny 1999.
Momba ity lalàna ity lafiny fototra amin'ny fizotran'ny fananganana Mandritra izany fotoana izany dia mamaritra ny adidin'ny mpikarakara trano, ary koa ny fahaizany sy ny sehatry ny fampiharana.
Kaodim-pananganana teknika (CTE).
Araka ny efa nambarako tany am-piandohan'ny lahatsoratra, mba hanamafisana fa mifanaraka amin'ny CTE ny trano, dia mila tetikasa mpanao maritrano sy ny fahazoan-dàlana hananganana avy amin'ny Filan-kevitry ny tanàna mifandraika amin'izany ianao.
Ny CTE dia manondro fitsipika lehibe mifehy ny fananganana trano tany Espana hatramin'ny 2006.
Noho izany fananganana ny fepetra takiana fototra amin'ny fiarovana sy ny onenana tranobe.
Tombony sy fatiantoka amin'ny trano hazo
Ary farany, tokony ho tamin'ny ora izy io, andao hiroso amin'ny mahaliana, ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny trano izay efa henonao / novakianao betsaka.
Toa any Espana no mitombo ny lamaody amin'ity karazana trano ity nefa mbola tsy fantatsika izay tena antenaina.
Ho an'ity dia hanome andiam-borosy maromaro amin'ny teboka tsara sy ratsy Afaka manana an'ity karazana trano ity izy ireo.
Tombony na teboka tsara.
Timber, ny fitaovana fananganana lehibe indrindra dia a insulator voajanahary izay afaka miaro antsika amin'ny toetr'andro ratsy.
Amin'ny lafiny iray, manohitra manao akanjo tsara vokarin'ny Masoandro, rivotra na hamandoana ka ny faharetany lava be izy.
Amin'ity etsy ambony ity (insulated voajanahary) ampiako fa tsy misy tsara noho ny manafana ny tranonao amin'ny ririnina ary milamina amin'ny fahavaratra, tombony iray izay misy ifandraisany ihany koa fitsitsiana angovo.
Ho fanampin'izany, ny hazo dia manana a fanoherana mekanika lehibe, izay tsy manakana azy tsy ho fitaovana matanjaka afaka manome fiarovana.
Misy vahaolana vaovao raha misy afo ary izany dia, miaraka amin'ireo fitsaboana vaovao miaraka amin'ny akora maharitra maharitra, ny fandoroana dia tsy manampy haingana fa ny kitay dia efa fitaovana miorina amin'ny afo, tiako holazaina amin'izany fa mirehitra miadana izy.
Tsy raharaha amin'ny trano vita amin'ny biriky, simenitra ary beton.
Miala amin'ilay fitaovana (hazo) mihitsy, dia mbola milaza izany ihany tena marobe izy io ary azo ampifanarahana amin'ny volavola rehetra trano ary azo namboarina tanteraka.
Mikasika ny fananganana azy dia tokony homarihina fa fananganana maharitra, mora vidy ary haingana izy io.
Maharitra satria fanorenana madio izy io dia mandany rano kely rehefa atao maina ny fananganana ary kely angovo no ampiasaina amin'ny fizahana sy fanamainana ny kitay.
Azo heverina ho loharanom-baovao azo havaozina koa izy io raha avy any anaty ala voatantana ny hazo.
Mora sy haingana izy io satria raha ampitahaina amin'ireo trano biriky dia amboarina manodidina ny hazo 6 volana farafaharatsiny ary manodidina a 20 na 25% mora kokoa noho izany dia takatry ny olona bebe kokoa izy ireo.
Tombony na teboka ratsy.
Miteny izany ny hazo dia fitaovana havaozina raha fehezina ny fitrandrahana azy Sabatra roa lela io Hatramin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna na fitrandrahana ara-dalàna fa fitrandrahana goavambe na tsy voafehy Hisy foana ary olana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny vokatra mahatsiravina mitranga raha tsy misy ireo zavamananaina miaraka amin'ny fandripahana ala tondra-drano izy ireo, fikaohon-tany, fahaverezan'ny biodiversité, fiantraikany ratsy amin'ny fametahana ny Carbon Dioxide (CO2), sns.
Teboka iray hafa tokony horaisina dia ny fikarakarana tompon'andraikitra tsy maintsy atao amin'ny hazo izany.
Izany no ilazako azy satria amin'ny maha voajanahary azy dia bibikely sy bibikely ary holatra no hanafika azy.
Tsy maintsy esorintsika ireo fanafihana ireo amin'ny sarany rehetra raha te-hanohy ao an-tranontsika isika. Na dia ankehitriny aza dia manana io olana io manamboatra mora como el mitsabo hazo amin'ny akora miaro sy tsy mahazaka rano.
Na izany aza, ny tokony ho raisina dia ny akora ampiasaina satria tsy mitovy ny mampiasa vokatra simika izay mety hanimba ny fahasalamantsika na ny fanjakan'ny kitay mandritra ny fotoana maharitra izay vokatra voajanahary na manaja miaraka amin'ny akora sy ny fahasalaman'ny olona.
Raha teboka ratsy tokony hodinihina dia izany tsy ny kaominina rehetra no mamela ny fananganana trano hazo satria araka ny "heverin'izy ireo" dia "vaky" ity karazana trano ity miaraka amin'ny tontolon'ny resaka famolavolana, loko ary lava sns.
koa, tsy ankasitrahana ireo trano ireo satria mety ho trano fananganana mahazatra izy io satria vaovao ny rafitra fananganana any amin'ny firenena sasany.
Avelao ireo fanahiana mety hitranga amin'ireo karazana trano ireo, manokana mihevitra aho fa mipetraka amin'ny trano hazo dia mety ho safidy tena tsara satria safidy hafa amin'ny trano mahazatra io "ekolojika" kokoa ary tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana, nefa tsy manana izany manja manokana manana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Trano hazo, fomba hisafidianana azy ireo, tombony sy fatiantoka
wiki dia hoy izy:
Trano hazo vs trano biriky sy simenitra nentim-paharazana
Ny Wood dia iray amin'ireo singa ankafizin'ny matihanina roa tonta amin'ny sehatra sy ny mpanjifa sy ny tompon-trano. Raha ny marina dia ity fitaovana ity angamba no hany havaozina, noho ny fihodinan'ny famokarana azy, ary manana toetra ara-batana mahaliana koa izy, tsy fantatry ny ankamaroan'ny akora fananganana. Inona no antony? Andao hiara-hamantatra izany.
Maivana ny trano hazo fa mahazaka mafy.
Araka ny fantantsika, ny hazo dia fitaovana maivana ary, vokatr'izany, mora entina. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy milamina ny trano hazo, ny mifanohitra amin'izay no izy! Ireo rafitry ny enta-mavesatra dia matanjaka tokoa ary ankoatry ny zavatra hafa, mamela ny fametrahana tsara indrindra amin'ny rindrina ho an'ny fanadiovan-tsakafo, kojakoja amin'ny rindrina, talantalana ary singa haingon-trano maro hafa. Ankoatr'izay, amin'ny fomba fijery seismika, ny fananganana hazo dia manana fiarovana avo lenta kokoa noho ny fananganana biriky, satria ambany dia ambany ny hamafiny. Midika izany fa ny trano hazo dia afaka mandray tsara ny angovo navoakan'ny horohoron-tany, izany hoe ny trano hazo dia trano fanoherana ny seismika.
Ny trano hazo dia mahatohitra fanoherana afo.
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, ny kitay dia mirehitra miadana ary, raha sendra misy haintrano, dia hazo mahery vaika no matanjaka kokoa noho ny tranobe nentin-drazana. Raha ny marina, ny etona ihany no asiana afo, ary mamela ny firafiny anatiny saika tsy miova. Amin'ny alàlan'ny carbonizing, ity sosona ity dia mahavita mampihena ny hafainganan'ny fielezan'ny lelafo, miasa ho toy ny insulator tena izy ary mitahiry ireo toetra miorim-paka ao amin'ilay rafitra, izay tsy voakorontana mihitsy. Ny simenitra sy ny vy kosa dia fitaovana mahatsapa fihenan'ny toetran'ny mekanika haingana. Noho io antony io, raha misy ny afo, ny trano hazo dia azo antoka kokoa noho ny homologation azy, ohatra, vita amin'ny beton.
Wood dia insulator thermo-acoustique tonga lafatra.
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka azy indrindra amin'ny trano hazo dia ny fananana insulatezy izay ananan'ity fitaovana ity. Raha ny marina, ny hazo dia manome antoka ny insolika akustika sy hafanana mahavariana. Noho io antony farany io dia misafidy hazo ireo firenena avaratra mba hamoronana rafitra ivelany sy anatiny ao an-tranony. Any Italia anefa, io fitaovana io dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny fananganana valindrihana, gorodona ary famaranana. Raha nanapa-kevitra ny hanangana ny trano hazo ianao dia tokony ho fantatrao fa hipetraka amin'ny trano misy toetr'andro mahafinaritra ianao, mafana amin'ny ririnina ary mangatsiaka amin'ny fahavaratra. Ny hazo ampiasaina amin'ny fananganana trano vita simba, raha ny marina, dia manana tahan'ny hamandoana marina izay, noho ny fizotra fanamainana manokana, dia miaro azy amin'ny loza ateraky ny bobongolo.
Mamaly amin'ny wiki